हेर्नुहोस् विदेशी मुद्राको विनिमय दर कति छ ? « Nagarik Khabar
हेर्नुहोस् विदेशी मुद्राको विनिमय दर कति छ ?
प्रकाशित मिति : 25 November, 2021 9:49 am
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबारको लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकले अमेरिकी डलर एकको खरिद दर अधिकतम ११८ रुपैयाँ ७४ पैसा र बिक्री दर ११९ रुपैयाँ ३४ पैसा कायम गरेको छ ।